Solom-bavan’ny vahoaka ifotony… | NewsMada
Solom-bavan’ny vahoaka ifotony…
Par Taratra sur 01/07/2019
Amin’izao, andrasana ny vokatra ofisialy tamin’ny fifidianana solombavambahoaka natao ny 27 mey lasa teo; eny, na efa fantapantatra mialoha aza. Hafa ihany ny ofisialy! Hilamina toy ny tamin’ny fifidianana filohan’ny Repoblika ny raharaha? Eny, na maro aza ny fitoriana: nahatratra 684 no voarain’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC). Manginy fotsiny ny fitarainana sy alahelo tetsy sy teroa.
Ho vita ihany ny zotram-pifidianana hatramin’ny famoahana ny vokatra ofisialy. Faniriana izay! Ahoana ny aorian’izay? Tsy inona fa ny fandraisan’ireo voafidy eo ny andraikiny. Na ahoana na ahoana, anisan’ny nahabe resaka iny fifidianana iny: nihena ny taham-pandraisana anjaran’ny mpifidy, be ny tsy tao anatin’ny lisi-pifidianana, nisy ny fitanilana sy fiandanian’ny tomponandraiki-panjakana…
Ny tena loza, ratsy endrika loatra ny Antenimierampirenena farany teo: nanjakan’ny kolikoly, manao takalon’aina ny fandaniana lalàna amin’izany, mivadibadika vondrona parlemantera arakaraka ny tombontsoany manokana ny mpikambana sasany… Hanao ahoana izany rehetra izany amin’izao? Anisan’ny nampihena ny taham-pahavitrihan’ny mpifidy ny tsy fahatokisany ny antoko sy ny mpanao politika?
Hisy sy ho mafy orina ary haharitra àry ve izay fifampitokisana izay? Mba ho tena solom-bavan’ny vahoaka ifotony tokoa izay voafidy eo. Solombavambahoakan’i Madagasikara, fa tsy solom-bavan’ny fitondrana, na antoko politika, na distrika… Eo ny fitondrana ny hetahetan’ny vahoaka, ny fanaraha-maso ny asan’ny governemanta, ny fanolorana tolo-dalàna, ny fanaovana tatitra amin’ny vahoaka…
Saika natao fotsiny aloha izay hahazoan-toerana; avy eo, mifampitady… Hanao ahoana? Misy na maro no tsy mahalala na tsy niomana amin’izay asan’ny solombavambahoaka. Mbola izay ihany ve aloha ny hoe politika eto Madagasikara amin’izao? Manao izay hahazoan-toerana fotsiny dia mitsapatsapa, mivadibadika, mora lalaovina… Hisy amin’izay ve ny fiovana? Izay no andrasan’ny vahoaka amin’izay hisolo vava azy.